Gobolka Sool iyo Sanadka Galbaday ee 2016 Buuggayga Xusuus Reebka | | Horufadhi Online
Saturday, December 31st, 2016 | Posted by A. Hindi
Gobolka Sool iyo Sanadka Galbaday ee 2016 Buuggayga Xusuus Reebka
Haddii Alle ila garab-galo waxa aan isku dayayaa in aan soo koobo dhacdooyinkii ugu saamayska iyo hadal-haynta badnaa ee sanadkan Galbaday ka dhacay Gobolka Sool. Waxa kale oo Iyana aynu qaar ka xusi doonaa Dhacdooyin aan Gobolka Sool ka dhicin, balse Saamays Siyaasaddeed iyo mid Bulsho ba ku yeeshay Gobolka.
Sanadkii 2016 waxa uu Gobolka Sool ugu bilaabmay si aan waxba ka duwanayn sidii ka horreeyay sagaalkii sano ee ugu dambeeyay. Bishii Jeeniwari ee Sanadkii hore, waxa hadal-haynta ugu badan ee Shacabka Laascaanood ay ahayd, Xildhibaanno isugu jira Khaatumo iyo Maakhir oo 7dii January ee sanadkii hore ay Diyaarad Muqdisho Xildhibaanadda kasoo qaaday ay Buuhoodle soo Caga-dhigatay.
Madaxweyanaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamed ‘Siilaanyo’ ayaa Waraysi uu siiyay idaacadda VOA-da waxa uu kaga hadlay Weftigaas Xildhibaannada ah ee Buuhoodle soo gaadhay isaga oo yidhi: ‘Cidina kuma xad-gudbi karo xaqa Aayo-ka-tashiga dadkayaga, iyo xurmada Madaxbannaanida dalkayaga, xuquuqda aas-saasiga ah, xudduudaha Somaliland waa lama taabtaan, diyaar waxa aannu u nahay in aannu dhiig u daadino dalkayaga hooyo”.
Bishii Febraayo ee Sanadkan dhammaanaya, waxa Warbaahinta Soomaaliyeed iyo mida Deegaankaba qabsaday Hadal-haynta Muran ka dhex aloosmay labada Gobol ee Sool iyo Nugaal, kadib markii 26-kii bishii Febraayo uu si rasmiya usoo shaacbaxday in Maamulka Gobolka Nugaal uu dhisme laba qol ah ka dhistay Deegaanka bixin. Ciidamo labada Gobol ka kala tegay ayaa halkaasi mudo 16 cisho ah isku horfadhiyay, iyada oo ugu dambayn badhtamihii bishii Maarso la dumiyay dhismeyaashaasi.
Subaxnimadii hore ee Bishii Maarso 20keedii ee Sanadkan galbaday, waxa Laascaanood soo gaadhay Ganacsadaha Caanka ah ee Maxamed Siciid Ducaalle ‘ Dahabshiil’. Waxaa sidoo kale Laascaanood ku sugnaa Xigtada Alle ha u Raxmadee Marxuumad Saado Cali Warsame oo mudo lagu xidhiidhinayay dilkeeda in ay wax ka oggaayeen Maamulka sare ee Shirkadda Dahabshiil. Culimaa’udiin Soomaaliyeed ayaa u xaqsooray labada dhinac, iyada oo halkaas lagu dhaariyay Ganacsade Maxamed Siciid Ducaalle in aannu waxba ka oggayn, dhaqaale ku bixin, cidna u dirin si ay u fuliyaan Dilkii Saado Cali Warsame. Dhaartaas ayaa ahayd mid lagu kala bogsaday.
Bishii April 10keedii, goor fiid ah waxa weerar qorshaysan lagu khaarajiyay Cabdilaahi Axmed “ Carrabey” oo ay walaalo ahaayeen Siyaasi Dhakool oo ka mid ah Xildhibaannada Golaha Wakiilada ee Maamulka Somaliland. Koox dabley ah oo weerarkaasi fulisay waa ay ka baxsadeen goobtii ay Dilka ka gaysteen.
Sida mar kasta dhacda, waxa 18kii bishii May Magaalada Laascaanood ka bilaabmay laba Xafladood oo iska soo horjeeda. Shacab tira badan ayaa isugu soo baxay Waddooyinka waaweyn ee Magaalada, kuwaas oo u dabaal-degayay Maalinta Nadaafadda oo Deegaannada SSC looga yaqaano in ay ku beeggantahay 18 May. Askarta Maamulka Somaliland ayaa Rasaas nool u adeegsaday Shacabkaasi. Afar Ruux oo mid ka mid ah uu Dhaawaciisu halis yahay ayaa waxyeelo kala duwan kasoo gaadhay Rasaastaasi kuwaas oo qaarkood Garoowe loo qaaday. 18-5-2016, waxa ay hayd maalintii waqtiga ugu badan ay Shacabku Waddooyinka ku sugnaayeen iyaga oo Calanka Soomaaliya la gaafwareegaya, iyaga oo ugu dambayn Salaadii Makhrib weeraray Shirkaddaha Telesom iyo Somtel oo ay ku eeddaynayeen in ay Maamulka la soo safteen.
30kii Bishii May, waxa Deegaanka Balli-waaqo ee Adhicaddeeye lagu Caleemo-saaray Suldaan cusub oo ay yeesheen Beesha Fiqishinni. Suldaan Musatafe Seed ayaa waxa Caleemo-saarkiisii kasoo qayb galay Madax-dhaqameed ka kala yimi, Muqdisho, Hargaysa, Buuhoodle, Garoowe, Boosaaso, Dhuusa-mareeb oo Gaadiidka Cirka iyo Dhulka kusoo gaadhay Magaalada Laascaanood. Alle Ha u naxariistee Ugaas Cabdillaahi Ciise Nuur, iyo Garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe ayaa ka mid ahaa isimada Deegaanka ee Caleemo-saarkaasi ka qaybgalay.
Horraantii Bishii June oo sidoo kalena ku beegnayd billowgii bishii Barakaysnayd ee Ramadaan, waxa Koonfurta Gobolka Sool ka qarxay dirir beelleed u dhaxaysa labada Beelood ee Qayaad iyo Bahararsame. 3dii bishii June ilaa 5tii bishii june, saddex cisho guddahood ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 30 ruux oo labada beelood kasoo kala jeeda. Colaadan ayaa Saamays ku yeelatay Nolosha Gobolka Sool, iyada oo uu yaraaday Isu-socodka Gaadiidka, waxaana bilaabmay dadaalo wejiyo badan oo lagu deminayo collaadaasi.
Isla bishaasi dharraartii ay ku beegnayd 16, ayaa Maleeshiyo Beelleed hubaysan ay weerar ku soo qaadeen Tuulada Yeyle oo ka tirsan Gobolka Sool. Laba ruux oo kasoo kala jeeda Burco iyo Laascaanood ayaa ku dhintay Tacshiirad ay riddeen Maleeshiyo Beelleedkaasi oo Masaajid ku ugaadhsanayay Ganacsade ka mid ah labada Ruux ee dhintay. Dhaqdhaqaaq iyo Gurmad beelleedyo ayaa ka bilaabmay deegaano badan oo ka tirsan Gobolka Sool iyo Buuhoodle, iyada oo deegaankaasi uu isu beddelay mid saan-saan collaadeed ka muuqato.
Maalintii ugu horraysay ee Bishii July ay dhallatay, waxa ay nagu salaantay Geerida mid ka mid ah isimada ugu caansanaa Deegaanadan. Alle ha u naxariistee Garaad Abshir Saalax Maxamed ayaa1-7-2016 ku geeriyooday Dalka Iswiidhan, iyada oo 10 cisho kadib Aas Qaran oo Milgo leh oo Isimada Soomaaliyeed isku arkeen loogu sameeyay Deegaanka Bali-cad. Waxa aan qof ahaan dhacdadan ku xasuustaa in aan 48 saac ku mashquulsanaa Ururinta iyo Qorista Taariikh-nololeedkii Garaad Abshir oo ugu dambayn Alle ii fuddudeeyay.
28kii Bishii July, goor Makhib ah ayaa waxa Weerar lagu soo qaaday Guddoomiyaha Shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom Laanteeda Laascaanood Cabdirisaaq Axmed Warsame “Cabdirisaaq Dhabayaco”. Weearkaasi oo ka dhacay Agagaarka Shirkadda Telesom xili uu Cabdirisaaq ka soo baxay Masjid aan sidaas uga durugsanayn Goobtiisa shaqada. Weerarkani waxa uu ahaa mid ka mid ah Dhacdooyinkii wada taabtay Shacabka ku dhaqan Magaalada Laascaanood. Saaxiibkay Cabdirisaaq waxa aan u rajaynayaa Caafimaad degdeg ah, isaga oo hadda Hawlo Caafimaad ugu maqan Dalka Dibaddiisa.
Alle ha u naxariistee Ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur, oo ka mid ahaa Madax-dhaqameedka Gobolka Soolm ayaa 17kii bishii August ku geeriyooday Dalka Turkiga. Afar cisho kadib, oo ku beeggan 21 bishii August ayaa Maydka Ugaaska lagu duuggay Magaalada Boocame, iyada oo ay ka qayb galeen Isimo ay ka mid ahaayeen Boqor Burhaan iyo Garaad Jaamac Garaad Cali. Siyaasiyiin ay ka midyihiin Madaxweyne kuxigeenada Puntland iyo Khaatumo iyo Wasiirka Arrimaha Guddaha ee Somaliland Yaasiin Faratoon ayaa isku arkay Aaskii Ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur.
1dii bishii September, Weerar ka dhacay Agagaarka Masjid Jaamaca Laascaanood ayaa lagu khaarajiyay Alle ha u raxmadee Maxamed Xirsi Yuusuf oo ahaa Madaxii Xisaabaadka Shirkadda Dahabshiil ee Gobolka Bannaadir oo Booqasho ku joogay Laascanaood oo uu ka soo jeeday. Marxuum Maxamed Xirsi Yuusuf, Alle ha u raxmadee waxa uu Laascaanood u yimi Shirar uu la qaadanayay Waxgaradka iyo Aqoonyahanka Laascaanood, isaga oo jeclaa in uu ka mid noqdo Xildhibaannada Dawladda Federaalka Soomaaliya. Isla weerarkaas Maxamed lagu khaarajiyay waxa ku dhaawacmay Ganacsade Siciid Cabdi Faandhe oo dhaawac halis ah soo gaadhay.
Dilkaas iyo laba dil oo kale oo kala dhacay 2di iyo 4tii Bishii Semtember oo ay gaysteen Askar ka tirsan Somaliland oo ka soo jeeda Burco, ayaa isbiirsaday. Dharaartii 4tii semtember waxa Magaalada Laascaanood ka dhacay Kacdoon ballaadhan iyo iska horimaad u dhaxeeya Booliska Somaliland iyo shacab gadoodsan. Shacabka ayaa la wareegay Saldhiga Dhexe ee Laasaanood, iyaga oo gubay Gaadiidkii Booliska ee halkaasi yaalay, waxa kale oo la wareegeen Xafiiskii Wasaaradda Gaadiidka iyo Hawlaha Guud ee Somaliland. Hal askari oo Booliska Somaliland ah ayaa dharaartaas dhintay saddex kalena dhaawac ahaan bay Boolisku usii qaateen. Waxaa xusid mudan in Taliyihii Qaybta Somaliland ee Dilka loo aaannaynay uu ku dhuuntay Safiito ku taala Saldhiga Dhexe oo Shacabku Gacanta ku hayaan, iyada oo mar dambe laga saaray.
Bisha Sembteper oo aad moodo in ay dhaceen dhacdooyin Isbar-bar socda ayaa aynu ka xusaynaa: 15-20 semptember waxa Tuulada Higalada shir uga furmay Madax-dhaqameed ka kala yimi Garoowe, Buuhoodle iyo Laascaanood oo qoddobo ka soo saaray. Waxaa maalmahaas magaalada Laascaanood si aad ah uga socday Xadhig aan loo aabe yeelin oo ay RRU-da Somaliland u gaysanayaan Shacabka ku dhaqan Laascaanood. Intii u dhaxaysay 22 ilaa 28 Bishii Semtemper ku dhawaad 200 oo ruux ayaa la xidhay oo qaarkood Hargaysa loo qaaday welina ay ku xidhanyihiin.
Qoraalka oo dheeraaday awgeed Bilaha Oktoobar, Novemer iyo Diisember waxa aynu kusoo koobaynaa in aad loo hadal-hayay Gurmadka Abaarraha, Dilal salka ku hayo beelo oo Gobolka ka dhacay iyo Deminta Collaada u dhaxaysa labada beellood ee Walaalaha ah, Weeraro ay Jabhadda Midaynta iyo xoraynta SSC ka fulisay Waqdari iyo Buurta-sayidka. Waxa aan ka madhnayn gorfaynta iyo Aragtiyo kala duwan oo laga bixinayo Qoddobada ka soo baxay Wadahadalada Maamulka Somaliland iyo Khaatumo. Soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa : ‘ Nin aan hal seegin habari ma dhallin’. Waxa aan ka cudur daaranayaa haddi ay jiraan Dhacdooyin dareenka Bulshada wada taabtay oo aan hilmaamay.
Qalinkii iyo Kaydkii : Aadan Jaamac Oogle ( Xabeeb )
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=29659
Posted by A. Hindi on Dec 31 2016. Filed under wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry